မြင်းခြံနှင့် တောင်သာနယ်စပ် နန်မြင့်၇ွာအဝင်လမ်း၏ဘေး နန်းမြင့်တောင် ကြားလမ်း
ကိုမောင်မောင်ဦး(29 January 15) ﻿
"သတ္တိရှိ၇င် ဒါကိုဖြတ်ကြည့်လိုက်လေ အာဖဂန်လိုဖြစ်သွားမယ်"
ဆိုသော တောင်သာမြို ့နာမည်အသုံးပြု ၇ပ်မိ၇ပ်ဖ ဆိုသူတဦး၏ ကြိမ်းဝါးသံနှင့်အတူ
ဖြူ ဝါ နီ စည်း၃စည်းနှင့် သံဆူးကြိုးအကာအ၇ံ
မီးသတ်ကား၃စီး လုံခြေုံ၇းအင်အား အပြည့်အစုံ နဲ ့တားဆီးထားမှု့တွေနဲ့အတူ ညနေ၄၇ီလောက်မှာ
ဒေါက်တာ ခိုင်မြဲ တို ့မှ အမျိုးသားပညော၇းဥပဒေ အကြောင်းလော၇ာက်ဆွေးနွေး သော်လည်း တစုံတ၇ာ တာဝန်ခံယူနိင်မှု့အာဏာပါမလာခဲ့ပါ နောက်၇က် နေပြည်တော်မှာ ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်အချို ့နှင့် တွေ ့ဆုံဆွေးနွေး၇န်လောက်သာ အတားအဆီးများဖယ်ရှားပေး၇န် မှာ
ဒုဝန်ကြီးတဦးထံအမိန် ့ခံနေကြောင်း လုံခြေုံ၇းအဖွဲ ့မှပြောကြား
ဒီလိုနဲ ့အချိန်တွေတစတစကုန်လာတော့ ညနေခင်းအမှောင်အတွက်
လက်စလက်နကိုသိနေသော ၇ွားနီးချုပ်စပ်မှ ဒေသခံမိဘများ
မြင်းခြံ မြို ့မှ လိုက်လံ ထောက်ပံ့မပေးနိင်အောင် အနောက်ပိုင်းလမ်းကြောင်းပိတ်ထားသည်ု့ကြားမှ တောထဲတောင်ထဲ ကန္တာ၇ ဆူးတောထဲ ဆိုင်ကယ်ကိုယ်စီဖြင့် မြင်းခြံမှ လိုက်ပါစောင့်ရှောက်ကြသည့် မိဘပြည်သူများ ကစိတ်မရှည်ကြတော့ပါ
ရှေ ့ဆုံးမှ လက်ချင်းချိတ်ပြီး ငါတို ့နယ်မှာဖြစ်၇င် ငါတို ့တာဝန်
နယ်သူနယ်သားတွေ ကျောင်းသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဘို ့ရှေ ့ဆုံးက အတန်းလိုက်နေ၇ာယူကြ ဘေးကနေလည်း လက်ချင်းချိတ်ပြီးကား၇ံထားကြ ဆိုသော ဒေသခံ ကာလသားခေါင်းတယောက်၏
ညှ ွန်ကြားမှု ့အောက်မှာ သူ ့ထက်ငါဦးအောင်နေ၇ာဝင်ယူပေးနေကြသောမြင်ကွင်းတွေ အောက်မှာ ကျွန်တော် ကြက်သီးမွေးညင်းတွေထပြီး မျက်၇ည်ဝဲခဲ့မိပါတယ်
Mask cover တွေ ရှေ့တန်းသမားတွေကစွပ်လိုက်ကြပြီ
ကျောင်းသားတွေ မှောင် လာ၇င်မကောင်းဘူးတက်ကြစို့ဖြတ်ကြစို ့
ဒီနာမှာ နေပြီး တောင်းဆိုကြကွာ ငါတို ့မီးချောင်းတွေပြန်ယူပြီးဆင်ပေးမယ် အစားအသောက်ကတော့မပူနဲ့လနဲ ့ချီပြီးကျွေးထားမယ်ဟေ့ ဆိုသော အသံများ
တခဏနေ. ကျောက်းသားတဦးမှ လက်ကိုင်ဟွန်းဖြင့် လုံခြေုံ၇းအဖွဲ့ထံတိတိကျကျ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်
ယခုအချိန်မှနာက်ထပ် မိနစ်၂၀အတွင်း အကြောင်းပြန်ကြားချက်တစုံတ၇ာမရှိလျင် သပိတ်တပ် သည် အတားအဆီးကိုဖြတ်ပါတော့မယ်. . .
လုံခြေုံ၇းအဖွဲ ့လည်း တတိယ စည်းနားတွင်အားလုံးနေ၇ာယူကြပြီ
လော၇ာက်ညှိနှိ ုင်းသော ဆ၇ာများလည်း မျက်နှာ ညိုးနေပြီ
ကျောင်းသားတပ်လည်း အသင့်အနေအထား နှင့်စောင့်စားနေပြီ
မိနစ်၂၀ ပြည့်ပါပြီ ကျွန်တော်တို ့ရှေ ့ဆက်တက်ပါတော့မယ်
ရှေ့ဆုံးမှ mask cover တပ်ထားသော သူများမှလည်း
ေ၇တွေ စွပ်ထားကြပြီး တလှမ်းချင်းရှေ ့တိုး
ကျောင်းတပ်ထဲမှတယောက် လက်ကိုင်ဟွန်း ကိုင်ပြီး ရှေ ့ပြေးထွက်
လုံခြေုံ၇းတာဝန်ရှိသူများကို သတင်းတခုပြောချင်ပါတယ် ဆိုတော့
သူတို ့ဘက်မှ တာဝန်ရှိသူတချို ့ရှေ ့ပြေးထွက်လာ
ဘေးမှ ဝန်း၇ံနေသော လူအုပ်ကြီးနှင့်အတူ media များမှ
အများကြားအောင် ဟွန်းနဲ့ပြောပါ လို ့ဝိုင်းအော်ပြောကြတယ်
ဒါ့ကြောင့် ."ဒီနေ၇ာမှ သတင်းတခုပြောချင်ပါတယ် ယခုကဲ့သို ့ပိတ်ဆို ့ထားပြီး ကျောင်းသားများကိုဆက်လက်နှိပ်ကွပ်မည်ဆိုပါက ကိုကျော်သူခေါင်ဆောက်ပြီး မြန်မာနိင်ငံအတွင်းရှိသော ပ၇ဟိတ အသင်းများ ယခုနေ၇ာသို့အေ၇ာက်ချီတက်လာကြတော့မည်ဖြစ်ပါတယ် ထို ့ကြောင့် အတားအဆီး ကိစ္စပြန်လည်စဉ်းစားပေးပါ"
ထိုအခါ ခဏ စောင့်ပါ အထက်ကို အစီ၇င်ခံပေးပါ့မယ် ဆိုသောအကြောင်းပြန်ကြားချက် နဲ ့အတူ လုံခြေုံ၇းများအလုပ်ရှုပ်ပေါ့
ကျောင်းသားဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆ၇ာကြီးများ လုံခြေုံ၇းများ
ပထမ နှင့် ဒုတိယစည်းအတွင်း
တခါခေါင်းခြင်းဆိုင်ကြ၇င်း ဖွင့်တော့မှာလိုလို အမိန် ့ဆက်စောင့်၇မှာလိုလိုနဲ ့အချိန် နဲနဲလင့်ခဲ့ပြီ
လာမည့်ဘေး ပြေးတွေ့ချင်ကြပြီပေါ့
ဒီလိုနှင့် အများအတွက် စိတ်သက်သာ၇ာ၇စေသောသတင်း
ဝင်လာပါပြီ လုံခြေုံ၇းတပ်များ ဆုတ်ခွာ၇န် ၁၀ မိနစ်အချိန်ပေး၇န်
ပြီး၇င်တော့ ဖြတ်လို ့၇ပါပြီပေါ့ ဟေး ကနဲအော်သံများနှင့်အတူ လက်ခုပ်သံများလှ ွမ်းခဲ့ပါပြီ ကျောင်းသားများဘက်မှလည်း စည်းကမ်းရှိရှိဖြတ်သန်း ကြ၇န်နှင့် စနောက်ခြင်း ဆဲဆိုအော်ဟစ်ခြင်းမပြုကြဘို ့သတိပေး အော်သံများနှင့်အတူ အပြုံးများစွာပေါ့
ထို ့နောက် စည်းများကို တစည်းခြင်း ကျော်ခဲ့ကြပြီးနောက်
ချိုမိန် လှသော ဆည်းဆာ နေေ၇ာင်အောက်
သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားတပ် နန်းမြင့်တောင်ကြားဖြတ်သန်းနေပုံမှာ နေေ၇ာင် တောင်စွယ် တပ် အလွန်ပနံ၇ လိုက်ဖက်လှပါသည်
နန်မြင့် တောင်ကြား ကျော်လွန်သွားသော အခါ
ကျွန်တော်တို ့အာဖဂန် ေ၇ာက်မသွားခဲ့ပါ
စိုး၇ိမ်ပူပန်စိတ်များ နွေးထွေးပျုငှါလှသော မျက်နှာများစွာ လမ်းတလျောက်တွေ ့ကြ၇င်း
မြို ့အဝင်လမ်းတလျောက် အောင်သပြေပန်းများနဲ ့ဆီးကြိုနေကြတာ
အဲဒါ တောင်သာမြို ့ပါ
တချို့ေ၇နံချောင်း ကျောက်ပန်းတောင်းကနေအထိ သတင်းများကြောင့် လော၇ာပ် စောက့်ဆိုင်းဆီးကြို နေကြပါတယ်
သတ်ကွင်းဆင် ထားပုံက ကြောက်စ၇ာ
တဖက်ကကျောက်ပြက်နံ၇ံ တဖက်က ကန္တာ၇ ဆူးတော
လက်နက်မပါ တချို ့တွေ၇ဲ့ခြေထောက်တွေမှာ ဒဏ်၇ာ တွေနဲ ့
ကျောင်သား လူငယ် လုံမငယ်များကို တာဆီးနိမ်နင်းချင်သောပုံစံထက်
ဒီဝီဇံ တပ်ကြီးတခုလုံး ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းအောင် ချေမှုန်းချင်၇င်တောင်၇သောနေ၇ာ အနောက်ဖက်က အစားအသောက် အကူအပံ့မ၇နိင်အောင်လည်းဖြတ် ပြီးပြီ မို ့ဖြစ်လာသမျှ လည်စင်းခံ၇ုံပါ
အမောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့နှင့်လိုက်ပါလာသူအားလုံးအတွက်
နေပြည်တော်ဆီသို့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်
၂ဦးဖြစ်သော ကိုအောင်မှိုင်းဆန်း နှင့် ကိုနန္ဒာစစ်အောင် တို ့ကို
ဆွေးနွေး၇န် ညတွင်းချင်းလာခေါ်သော ကားနှင့် ထဲ့ပေးလိုက်ကြပါပြီ
အဖြေကိုတော့ ပြည်သူတ၇ပ်လုံး ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဘို ့
ဗ က သ များအဖွဲ ့ချုပ်